Ukhonjwa kuBafana umqeqeshi olaxaze iqembu isigubhukane | News24
Ukhonjwa kuBafana umqeqeshi olaxaze iqembu isigubhukane
Cape Town – Sekuvele imibiko yokuthi uRoger de Sa uzomenyezelwa njengomqeqeshi omusha weqembu lesizwe, iBafana Bafana, kulandela ukusula kwakhe isigubhukane njengomqeqeshi weMaritzburg United – kanti kuthiwa uzosizwa uCraig Rosslee.
NgoLwesine, iMaritzburg United ikuqinisekisile ukuthi uDe Sa useshiyile kuleli qembu, ezinsukwini ezingu-72 nje kuphela enkontilekeni yakhe yezinyanga eziyisithupha.
Lo mqeqeshi owayeqeqesha i-Ajax Cape Town ujoyine leli qembu laKwaZulu-Natal ngoJanuwari kunyaka ka-2017 ngemuva kokushiya umsebenzi wakhe ku-Ajax Cape Town. UDe Sa ubalule “izizathu zomndeni” njengesizathu sakhe sokuthi abuyele eKapa.
Ngakolunye uhlangothi, uRosslee ubelokhu eyiTechnical Director kuCape Town City ngaphambi kokuba ayishiye ngesonto eledlule, nalapho uSihlalo weqembu, uJohn Comitis, eye wakuqinisekisa kuKickOff ukuthi ubefuna (uRosslee) ukoyoqhuba izifundo ze-UEFA zokuqeqesha ukuze anyuse amathuba akhe okuqeqesha ku-PSL.
OLUNYE UDABA: Kuphelile obekuhlanganise u-De Sa ne-United
Kodwa-ke iSport24 isithole ukuthi uDe Sa uyena osehamba phambili nozomenyezelwa njengomqeqeshi omusha weBafana Bafana kanye nokuthi uzoletha uRosslee ukuba abe ngumsizi wakhe.
Esikhathini esingaphambilini uDe Sa wahlangana ne-SAFA ukuxoxa ngeqhaza angase alibambe ngaphakathi kule nhlangano – njengomqeqeshi weBafana noma njengomqeqeshi weqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwengu-23.
Kodwa-ke omele uDe Sa, uSteve Kapeluschnik, utshele iTimesLive ukuthi: “Ukusula kwakhe akuhlangene nokuxhumana kwakhe neSAFA noma ngabe ubani ngomsebenzi wokuqeqesha.”
Ngakolunye uhlangothi, iSAFA isikuqinisekisile ukuthi izomemezela umqeqeshi omusha weBafana Bafana ngemuva komdlalo wobungani ne-Angola, nozodlalwa ngomhlaka-28 kuMashi, ngoLwesibili.